“ KORRI SABAA ” GAGGEEFFAMEE KAN “ABO” TI !! – kutaa 2ffaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“ KORRI SABAA ” GAGGEEFFAMEE KAN “ABO” TI !! – kutaa 2ffaa
“ KORRI SABAA” GAGGEEFFAMEE KAN “ABO” TI !!
SEENAA Y.G (2005) -kutaa 2ffaa
Korri Sabaa Gaggeeffamee kan ABO ti ! jechuun maal jechuu akka ta’ee, ka wallaalu jira natti hin fakkaatu. Korri kun Guutummaatti ABO ilaallata. Kora kanaa fi Ummata Oromoo kan walitti fiduu, Kora kanarraa waan asi ba’uu, waan Sabni Oromoo barbaaduu fi irraa eeguu qofa osoo hin taanee, qajeelcha achii ba’uun Hogganamee Qabsoo isaa galiin ga’achuuf wixinee ykn adeemsa jiruudhaa. Kora akkasii Dhaabootuma siyaasaa addunyaa kanaa maraatu gaggeeffata. Kan Oromoo irra ga’ee waan abiddaa fi bishaan godhatu hin qabu. Korri barbaachisummaan isaa irra jireessaan murteelee ykn dhimmoota Angoo ol aanaan murteeffaman argachuufidha. Itti aansee Filannoo fi jijjiirraa Hogganummaa adda addaa mirkaneessufiidhaa. Kanuma dubbiin ijoon.
Korri ABO 3ffaan bara 2005 gaggeeffame. Waggaa 12 booda 4ffaan gaggeeffame. Kanarratti gaaffilee hedduutu ka’aa.anis akkasuma. Garuu gaaffii kana facaasuun dura deebii ofii barbaachuu yaaleera. Ani qorannoo fi hordoffii godheenin gama anaaf naa hubatameenin deebisuu yaalee. yaada kennachaa jirus kan dhuunfaa kiyyaa naaf hubadhaa. Dhalooti itti aanullee waa akka hubatuuf waanuma beektan irra deebi’uu malaa hin nuffiinaa. Dhaloota qajeelaa qabnaa. Dhimma Koraa kana Namoonni hedduun akka dantaa isaanitti micciiranii dhiheessanii , dubbii gama barbaadanitti jal’ifachuu barbaadu. Kun eessaanu nama hin ga’uu. Dogoggorri fedhe gama kamiinuu jiraatu, Dogoggora sana qabsiisanii dubbii qajeelchuu qofaatu karaadhaa. Komeen ariifannaan kennamtuu taajjabamurra hin dabartuu. Dubbii 1, 2 jechaa ilaalla.
Korri sabaa 4ffaa maaf turee ???
Bara 2005 booda , Korri sabaa bara 2009 gaggeeffamuu qaba ture. Osoo gaggeeffamee hundaafuu dansaadhaa. Dhaaba waan kanaaf suduudaan ilaallatu garuu hin mijanneef. Maaltu ta’ee ? bara baatii hagayyaa bara 2008 Dhaaba kana keessatti maaltu akka umamee hundatu beeka. Yeroo sanatti maqaa jijjiiramaan kanneen wal gurmeessan, dhaaba kana keessaa ba’uun balaa hin qabu jettuu ? gaaga’ama geesisuu maluu warruma dhandhamee qofaatu beeka. Ganamuu caalaa wanni nama miidhu jiraa.? Caasaa dhaabichaa guutuu wayyaaneetti dhaqanii laachuu caalaa wanni nama madeessu jiraa ? ta’ee jedhanii silaa warra Kora sabaa milkeessuu malan maallaqaan gawwamsanii fudhatanii ba’uu caalaa hammeenyi jiraa ? ABOn harka akka kennuuf ykn ofii dhuunfachuuf guutummaa Dinagadee isaa akkaataa itti laamsheessuu fi qabeenyaa saamuu caalaa wanni adeemsa nama gufachiisuu jiraa ? Korri sabaa 2009 osoo hin geenyee waa hundaa dhuunfannee ofiin gaggeeffanna jedhanii hammeenyaa warra hojjatee osoo hin qeeqinee, warra qabsicha cichanii qabaniin maa hin gaggeessinee ? jedhanii gaafachuun haqummaa qabaataa ? guutummaa caasaa Biyya keessaa fi alaa , akkasumas waraana cabsanii fudhatanii wayyaaneetti galamee waan hundi ega saaxilamee booda of dandamachiisuu moo, Kora gaggeessuutu dursa ? Korri kun Namootuma dhaabaa jechuu mitii ? kanarra ibsuu hin barbaadu !!ega kun hundi ta’ee ammo, waan jiru bakkatti deebisuuf yeroo akkamii fudhata ? keessa ofii irra deebi’anii ijaaruu fi waan diinni nama keessatti dhiisee ba’uu ammamitti sirreeffatu ? kanas kan itti gubatee qofaatu beeka. Caasaa tokko ijaaranii wal simsiisuuf waggaa meeqa fudhata ? waggaa amma kana kan itti dhamaatan yennaa wayyaanee harka galuu, deebisuuf waggaa meeqa fudhata ? yoo kana herreegnee, dhugaa jiru hubannaa. Rakkoo xixiqqoo 100 argurra , waan gaarii guddaan tokko arguutu bilhcina.
Korri sabaa bara 2009 milkaa’uu yoo didee, bara 2013 taa’amuu qaba ture. Garuu hin taanee. Maaliif ? bara 2008 irraa kaasee rakkoo mooraa qabsoo keessa jiru ni beeknaa. ABO 3 fi 4 argaa turre. Isa boodas ADO dhufee ABO isa dhugaa keessaas nama baafatee asi ba’ee. Kana gidduutti araara buusuuf sochii tures hundatu beeka. Ammas Mee Kora sabaa waamuutu dursamoo, waan nama qaaneessuu kana tasgabbeessuutu dursuu qaba ? keessa ofii tasgabbeessanii akkaataa wal faana hiriiran mijeessuu moo, Maqaaf kora sabaatti fiiguutu dursa ? kun Bilchina warra ganameen qabamee har’aa milkiin itti galmaa’edha. Warri kaleessa fiigichaa fi miidiyaan waan dubbataniif waa jijjiiramu itti fakkaatu har’allee hin barannee jiru. Irra jireessi irraa baratee ummata aaga dhageesisuuf qophaa’aa jira.
Inumaa Hogganoonni bara 2000 kaasanii ganamaa fi dabarfamanii kennamaa turan, qabsoo kanatti cichanii, shira diinaarra aananii, hangumti walitti haftee lafee waliif taatee keessaa fi alatti waan irratti aggaamamee dandamatanii, beela’anii dheebootanii, abdii osoo hin kutannee funyaan diinaa jalatti qeerroo mootummaa wayyaanee raasuu ijaaruun isaanii Gootummaa Gootummaa caaluudhaa. Bosonaa fi rakkoo keessatti na dhiisanii deemanii anaan maaltu na rakkisee ? jedhanii jireenyaaf osoo hin fiignee , halakanii fi guyyaa hojjatanii Dhaloota Gantummaa hin beeknee uumuu isaanitti dinqisifatamuu qabu. Warri isaan irratti arraba dheeratu maal godhan ? laptop dhiheeffatanii dhaadachuumaa mitii ? maakkiyaatoo fi caatii qabatanii mobaayilumaan katabaa ooluu mitii ? mee quuqama Ummata isaaniif qaban maaliin ibsu ? mee wayyaaneetti maal darbatan ? hin jiru.waan hin jirreetti abdachu irra waanuma jiru jabeeffchuu hin wayyuu ? mucaan osoo hin umamnee maqaa moggaasuun akkam ?maqaa moggaasuurra ka jiru fi kan maqaa qaburra kamtu wayya ?
Namoonni komee tarrisaa jiran, hiikkaan Kora sabaaf kennan dogoggora guddaa qaba. Kora sabaa kana fonqolchaaf itti gargaaramuu barbaadu. Korri sabaa sagaantaa Bilisummaa gonfachiisuu milkeessanii asi ittiin ba’an gochuurra, Ebaluu akkamiin achirraa ittiin ariinaa ? jedhanii nama gurmeeffachutti fudhatu. Kanaafidhaa har’aa Korri sabaa maal akka gaggeeffatee fi waan irratti hin mari’annee tokkollee osoo yaada irratti hin kenniin, Hogganoota filaman irratti kan lallaban. Korri sabaa maa turee ? isa jedhuuf warri qaamaa qalbiin umurii isaanii itti guban kanarra yaada quubsaa laachuu danda’uu. Ani garuu komachuu dura rakkoo akkasillee isaan mudachuu danda’aa jedhee hubachuu yaaleera. Hogganni dhaabaa rakkoo fi hanqina qabaachuu malan. Gama kamiinuu. Garuu waan hundaa isaanuma irratti tuullee yakkuu barbaannaa taanaan namummaa miti. Bakka isaan jiran of kaa’anii ilaaluutu murteessaadhaa. Mee yaada qabatamaa gubbaa kaa’ameetti dabalee, Kora sabaa gaggeeffachuuf Dingdeen nu barbaachisuu hangamii ? yoo jennee rakkoo saamichaa fi ABO dhabamsiisuu keessa dabramee yeroo gabaabaa kana keessatti Nama 100 ol addunyaa irraa walitti waamuun waan qoosaa miti. Yoo hanga kana hubannoo argachuuf tattaafannee yaadi ykn qeeqi laannu madaalawaa fi ijaaraa ta’aa.
Korri Sabaa ABO eenyun ilaallata ?
Korri sabaa 4ffaan abbummaan ABO ilaallata. ABOn karaa kora sabaan waan murteeffatee hundisaa adda durummaan Dantaa Saba Oromoo Ilaallata. Kora kanaan Ummati Oromoo hin qoratamu. Kan itti qoratamuu ABO dha. Bu’aa inni ummata kanaaf argamsifamuun qoratama. Gilgaalama.. Sababaa kanaaf waan Kora kana keessatti gaggeeffamu fi ta’uu hundumtuu miseensaa fi Hoggana kan ilaallatu. Kanaaf Kora kana irratti kan hirmaatan , Miseensoota Gumii sabaa guutuu, miseensoota koree hojii raawwachiiftuu, Qondaaloota waraanaa, Hogganoota Qeerroo fi Maadheelee Ummataa ta’uu. Keessummoonni kabajaa jiraachu malu. Garuu marii kora sabaa murteessoo irratti hirmaachuus dhiisuus danda’uu. Korri sabaa paarlaamaa miti. Paarlaamaan ykn caffeen humnoota ilaalcha adda addaa keessa jiraniidhaa. Achi keessatti abbootii amantii fi waldaalee itti waamuu danda’an. Yoo qabsoorra jiraattee waammachuu dandeessef guyyaa dhumaa waammattee sirna cufiinsaa gagggeessuu dandeessa. Dangaan isaa kanuma.Warra qabsoorra jiraniin , waldaalee amantillee hirmaachisuu qabu ykn dhaabbilee miti-mootummaa waamu qabu jedhamee qeeqi yennaa dhihaatu nama qaanfachiisa. Warrumti kana jedhee qeequ mee isaanuu kana milkeessuu irratti eegna. Kan halgaa kabajanii kan ofii laga marqaan wal fakkeessuun dadhabiina guddaadhaa. Korri Sabaa ABO kanuma dhaabaati. Korri Sabaa ABOf qaama Hogganaa isa ol aanaadhaa jechuudhaa.
Hoggana Filuu fi murtiilee dabran ykn raggaasifaman ilaalchisee:-
Waan addunyaan itti jirtuu nu bira ga’ee hin laafatu , hin jijjiramuus. Gumiin sabaa Miseensa keessaa Hoggana ol aanaan filama. Gumii sabaa keessaa ammoo Hayyu Duree irraa kaasee Koree Hojii raawwachiiftuun filaman. Mseensoota Gumii sabaa Ulaagaa dhaabaan kaadhimaman Hayyu dureetu Koratti dhiheessee raggaasisa. Filuu fi filatamuu Hogganootaa kan ilaallatu qaamuma kana qofa. Dhimma dhaabaa waan ta’eef. Kora sabaa kana irratti heeraa fi seeraa dhaabaa akkasumas sagantaa siyaasaa dhaabaa irratti dursamee miseensi bakka jirutti akka irratti mari’atu taasifamee, , waan itti dabaluu fi keessaa baasuu ergatee sagalee isaa dhageesifata. Dhaaboota siyaasaa addunyaa kana irra jiran kanumaan masakaman. Kora sabaa dhaaba tokko irratti dhaaba biraa ilaalchakeenu tokko ta’ee hin hirmaachistuu. ABOn waan saba isaaf yaadu hundaa irratti murteeffateera. Milkaa’uu fi dhiisuun, hojiirra oolchuu fi dhiisuun ka biraati. Waan ummata kanaaf tolan akkuma murteeffattu rakkoo si quunnamullee walumaan keessa . rakkoo kana dhaabuma kanatu beeka malee ummatatti hin himanii ? Hayyuu dureen maaliif dabalamee filatamee ? gadaan kana hin hayyamuu . kkf inuma dubbatamu. Garuu dubbii gadi fageessanii hubachuu feesisa.jiraachuu ABO kan hin feenee, filamu hayyu duree ni jaallata hin jennu. Warri ammo quuqamneema kana komanna jedhan, dubbii kanatti warri gumii sabaa caalaa itti dhiheenya hin qabanii maaliif yaadi isaanii madaalawaa hin ta’uu ?
Korri sabaa yoo xiqqaatee guyyaa 10f gaggeeffamee. Murtiilee heedduu dabarseera. Murteelee fi hojiilee boonsaa ta’an hedduu keessaa kan Hayyu duree qofaa maaliif nu guba ? korri sabaa, sochiin qabsoo addunyaa raasaa jiruu, sochiin qeerroo wayyaanee raasee warri ala jirru osooma wayyaanee kuffisanii biyyattti deebinee jennee gaabbinuu dalagaama Hoggana kanaan mitii ? maaliif kanaan isaan hin madaalluu ? Hogganni ADO , WFDO, KBO, maaliif komee akkasii irratti hin kaafnu ? mee Dhaabootuma siyaasaa Oromoo keessaa kan Akka ABO waa hundaa gaggeeffatu jiraa ? Hoggana isaa ifatti beeksisee hojjatu jiraa ? addunyaa guutuu socha’aa jiru jiraa ? caasaa Biyya keessaan wayyaanee raasaa jiru jiraa ? maarree Hoggana kana eenyyun wal bira qabdanii waraanuu barbaadduu ? bitaa fi mirga yennaa ilaalluu, dadhabbii ofii dhokifachuuf caraanuus osoo hin taanee, jabaatees dhiisees, ammatti mitii waggoota 50 dhufaniyyuu ABO caalaa kan Ummata kanaaf aantummaa qabu hin dhalatu. Kun dhaadannoo miti. Dhugaadhaa. Dhaloota Biyya keessaa qabsoo kana dhaaluu qabuu fi warra qabsoo kana eegalan gidduu kanneen jiran, Dhaaba siyaasaa Saba kanaaf furmaata fidu ijaaru jettanii gonkumaa hin yaadiinaa. Maaliif ? habashummaan mo’amnee jirra. Habashummaan nu moonaan hinaaftuu fi fonqolchuu, akkasumas of tuulummaa dhaalla. Kun jiraannaan gonkumaa Oromoof hin taanu. Waliinu hin dhaabbannu.
Kutaa 3ffaa itti fufa
HORAA BULAA !!!!!!!!!!